Spielwarenmesse 2022: Nyika ina dzakasimba dzepasirese - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Jan 25, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau, Nuremberg Toy Fair
Sustainability zvakare muitiro padhijitari toy fair. Inokurudzira vanogadzira matoyi pasirese kuti vauye nezvigadzirwa zvitsva. Iyo Spielwarenmesse inosimbisa uku kukosha kukuru ne "Megatrend 'Toys enda Green'". Iwo mana mapoka "Made by Nature", "Inspired by Nature", "Recycle & Gadzira" uye "Discover Sustainability" anounzwa kuhupenyu kuburikidza nemienzaniso yechigadzirwa.
Musoro wekusimudzira wakakosha zvikuru pasi rose. "Kuitira kusimbisa kukosha kwayo kukuru kuindasitiri yematoyi zvakare, iyo Spielwarenmesse iri kutarisa nezve matoyi akasimba uye ezvakatipoteredza ane Toys go Green megatrend," anodaro Spielwarenmesse eG pane imwe yenzvimbo huru dzezvidzidzo munguva pfupi iri kutevera. yakatanga chiitiko chedigital trade fair.
Sustainability: "Green Toys" ndeyemazuva ano
Pamwe chete nenyanzvi kubva ku "Trend Committee", boka riri pamusangano wekutengeserana wepasi rose rakatsanangura zvikamu zvina zvemaitiro, izvo zvigadzirwa zvakakodzera zvakagoverwa: "Made by Nature" inoratidza matoyi akagadzirwa nezvinhu zvakasikwa - kubva pamatanda uye. mushenjere kumakoki kana chibage kumvere nerabha. Zvinyorwa zvine chekuita ne "Inspired by Nature" zvakabva pane bio-based mapurasitiki, seaya akagadzirwa neshuga, starch, cellulose uye mapuroteni. "Recycle & Gadzira" inotarisa mukugadzirwa kubva kune zvakashandiswa patsva zvinhu uye kugadzirwa kwemazano matsva emutambo kuburikidza nekusimudzira. Mu "Discover Sustainability" misoro yezvakatipoteredza nemamiriro ekunze inotsanangurwa nenzira yekutamba - ivo vanosimudzirawo ruzivo rwekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye kusimba.
Uye zvakare, hurukuro dzemazuva ese dzeToys go Green dzichafambiswa nedhijitari muToy Bhizinesi Forum kuSpielwarenmesse. Under www.toyfair.de/toysgogreen ruzivo rwese nezve megatrend rwakapfupikiswa zvakajeka. Apendikisi inonyora zvigadzirwa kubva kune varatidziri vepasirese paSpielwarenmesse muzvikamu zvina zvezvigadzirwa "Made by Nature", "Inspired by Nature", "Recycle & Gadzira" uye "Discover Sustainability".
Kare Nyika Itsva: New update inounza kuenzanisa shanduko
Inotevera PUBG: Nzvimbo dzekurwira dzakafarirwa sezvazvaive payakaburitswa: Thanks kune Yemahara-2-Play
Kuburitswa kwePlaystation 5 kwakasimbiswa: Sony inozivisa zuva rePS5
Board Game Circus inotora Kuhondo! mune portfolio
Ishe weRings: Living Card Game inowanikwa seKuwana Kwekutanga